Shirkadda Diyaaradaha ee Alaska ayaa leh maya xayawaanka taageerada shucuurta ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Shirkadda Diyaaradaha ee Alaska ayaa leh maya xayawaanka taageerada shucuurta ah
Ka dib isbeddeladii ugu dambeeyay ee ku yimid sharciyada Waaxda Gaadiidka Mareykanka (DOT), Alaska Airlines mar dambe ma aqbali doonto xayawaanka taageerada shucuurta duulimaadyadeeda. Laga bilaabo Janaayo 11, 2021, Alaska waxay qaadi doontaa oo keliya eeyaha adeegga, kuwaas oo si gaar ah loogu tababaray inay qabtaan howlo loogu daneynayo shaqsi aqoon leh oo naafo ah.
Horaantii bishaan DOT waxay tiri mar dambe uma baahnaan doonto shirkadaha duulimaadyada inay sameystaan ​​isla degaanada xayawaanka taageerada shucuurta ah sida looga baahan yahay eeyaha adeega u tababaran. Isbeddelada xeerarka 'DOT' ayaa yimid ka dib markii jawaab celin laga helay warshadaha duulimaadka iyo bulshada naafada ah ee la xiriirta dhacdooyin badan oo xagga shucuurta ah oo lagu taageerayo dhaqan-xumo taasoo sababtay dhaawacyo, haliso caafimaad iyo waxyeelo loo geysto qolalka diyaaradaha.
"Isbadalkan sharciyeynta ah waa war farxad leh, maxaa yeelay wuxuu naga caawin doonaa inaan yareyno khalkhalka saaran, isla markaana aan sii wadno martigelinta martideena la socda xayawaanaadka aqoonta leh," ayuu yiri Ray Prentice, oo ah agaasimaha u doodista macaamiisha ee Alaska Airlines.
Nidaamka dib loo eegay, Alaska wuxuu aqbali doonaa ugu badnaan laba eey adeeg ah martidii martida ah, si loogu daro eyda u adeega maskaxda. Martida waxaa looga baahan doonaa inay soo buuxiyaan foomka 'DOT', oo laga heli karo AlaskaAir.com laga bilaabo Janaayo 11, iyagoo cadeynaya in xayawaankoodu yahay eey adeeg sharci ah leh, la tababaray lana talaalay isla markaana u dhaqmi doono si haboon safarka. Boos celinta la sii qabtay wax ka badan 48 saacadood safarka ka hor, martida waa inay ku soo gudbiyaan foomka oo dhammaystiran emayl. Boos celinta la xareeyay wax ka yar 48 saacadood safarka ka hor, martida waa inay foomka shaqsi ahaan ugu gudbiyaan Wakiilka Adeegga Macaamiisha markay yimaadaan garoonka diyaaradaha.
Alaska waxay sii wadi doontaa inay aqbasho xayawaanka taageerada shucuurta iyada oo la raacayo siyaasadeeda hada jirta ee boos celinta oo la xareeyay kahor Janaayo 11, 2021, duulimaadyada Febraayo 28, 2021. Majiro xayawaan taageero shucuur ah oo loo aqbali doono safarka wixii ka dambeeya Febraayo, 28, 2021.